Warqad Soo Dhaweyn ah - Machadka Waxbaridda Labada Luqadood
Bogga ugu weyn AboutKu soo Dhawow warqadda
Waraaq ka socota xafiiska fulinta
Salaan, waana ku soo dhaweynayaa Machadka Waxbarashada Laba-luqadlaha (BEI). Laga soo bilaabo bilowgiisii ​​yaraa ee 1982, BEI waxay noqotey mid ka mid ah xarumaha luqadeed ee ugu muhiimsan gobolka iyo xarumaha tababarka dhaqanka. Dhinac kasta, waxaan ku hawlannahay caawinta shakhsiyaadka si ay u helaan oo ay u fahmaan luqadaha iyo dhaqamada kale. Dadku machad weyn ayey ka dhigayaan, marka haddii aad tahay arday, macallin, xubin shaqaale ah, qalin jabiyay, shirkad, deris, ama soo booqde, xiisahaaga iyo xamaasadaada waa la qiimeeyaa waana la qadarin karaa.
Waa dadaalkeena wadajirka ah, si kastaba ha noqotee, in maanta machadkaan ka dhigo meel firfircoon oo wax lagu barto, wax lagu barto, lagu shaqeeyo, iyo saaxiibo cusub lagu sameeyo nolosha.
Sida aan wada ogsoonahay adduunkeenu wuu sii yaraanayaa. Waxaan kula xiriiri karnaa kuwa kale adduunka oo dhan adoo gujinaya badhanka. Aad uga muhiimsan sidii hore, luuqaduhu maahan oo keliya isgaarsiin, laakiin sidoo kale waa aalado iyo xirfado isku xirka iyo la shaqeynta asxaabtayada. Halkan halkan BEI, ugu horreyntii, ugu horrayn, waa isku xidhka dadka.
Waxaan fileynaa in macalimiinteenu ay noqdaan macalimiin heer sare ah, shaqaalaheenana ay noqdaan kuwo naxariis badan, u jahaysan adeeg, iyo wixii ka sareeya, fududeeyayaal wax ku ool ah. Waxay ka muuqdaan ruuxi deeqsinimo iyo rajo wanaagsan iyo dabeecad aan daal lahayn oo halkan ku badan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u fidinaa ardaydeena bulsho kala duwanaan iyo isku soo dhawaansho iyo tikniyoolajiyad casri ah oo siineysa baaxadda ugu ballaaran ee suurtagalka ah ee barashada luqadda la dedejiyay, haddana xoogga la saaray si loo gaaro natiijooyin tayo leh.
Farxad ayey ii tahay inaan kugu soo dhoweeyo BEI. Shaqaalaheena iyo macalimiinteenu waxay ku faraxsan yihiin fursadan inay kula shaqeeyaan oo ay kaa caawiyaan inaad ku gaarto hadafkaaga iyo ujeedooyinkaaga luqadeed. Hambalyada ugu fiican markaad bilaabeysid safarkaaga luqadeed. Waan ku taageeri doonnaa intaad socoto.
Qaran ahaan waxaa aqoonsi loo fidiyay iyadoo loo marayo Golaha Aqoonsiga ee Sii wadida Waxbarashada iyo Tababbarka (ACCET).
Waxaa oggolaaday Wasaaradda Amniga Gudaha inay qorto ardayda caalamiga ah ee aan soogalootiga ahayn.
Xubin la ansixiyay oo ka mid ah Ururka Qaranka ee Arimaha Ardayda Dibadda (hadda NAFSA: Ururka Baarayaasha Caalamiga ah).
Waxaa u fasaxay Waaxda Amniga Gudaha inuu siinayo ESL / taariikh iyo koorso dowladda shisheeyaha sharciga ah ee hoos imaada Sharciga Dib-u-habeeynta iyo Xakamaynta Socdaalka ee 1986 ("Aminga").
Ururka Luuqada qalaad ee Texas.
Ururka Macallimiinta Luqadda Shiinaha ee Texas.
Macallimiinta Ingiriisiga ku hadla oo ku hadla luqadaha kale.
Ururka Mareykanka ee Barnaamijyada Ingiriisiga Degdegga ah